[Review] Máy triệt lông Braun có tốt không? Gồm mấy loại? | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Máy triệt lông Braun có tốt không? Gồm mấy loại? | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Máy triệt lông Braun có tốt không? Gồm mấy loại? | Muasalebang in Muasalebang
Ingabe ufuna ikhambi elihlala njalo lokususa izinwele elikusiza ukuthi ugqoke ngokuzethemba izingubo eziwubukhazikhazi? Nokho, kunemikhiqizo eminingi emakethe namuhla Umshini wokukhipha izinwele, lokhu kukwenza uzibuze, ungazi ukuthi ukhetha luphi uhlobo? Ungakhathazeki, nalu ulwazi Ukubuyekezwa komshini wokukhipha izinwele ze-Braun Phezulu – Imishini yokususa izinwele “yenza isiphepho” futhi ithenjwa ngabesifazane futhi ithola ukubuyekezwa okuphezulu kakhulu.
1 Umshini wokukhipha izinwele we-Braun brand
2 Kungani kufanele ukhethe umshini wokususa izinwele we-Braun?
3 Ukubuyekezwa kwemigqa engu-4 yomkhiqizo womshini wokukhipha izinwele we-Braun ongazithenga
3.1 3.1 I-Braun Silk Expert Pro 5 PL5237 umshini wokukhipha izinwele osezingeni eliphezulu
3.2 3.2 Umshini wokususa izinwele we-Braun Silk-Expert Pro 5 PL5137 uphephile
3.3 3.3 Isazi Esiphezulu Se-Braun Silk Pro 3 PL3111 Umshini Wokususa Izinwele
3.4 3.4 Braun 5280 Silk Epil 5. umshini wokukhipha izinwele nokususwa kwezinwele
4 Ungawusebenzisa kanjani umshini wokususa izinwele we-Braun ngempumelelo nangokuphepha
Umshini wokukhipha izinwele we-Braun brand
UBraun waziwa njengomkhiqizo odumile waseJalimane onguchwepheshe ekuhlinzekeni ngemikhiqizo yasendlini neyokunakekelwa kwesikhumba ephezulu. Lo mkhiqizo wasungulwa ngunjiniyela uMax Braun ngeminyaka yawo-1920, wabe eseqala ukwandisa indawo yokukhiqiza ngo-1928. UBraun waduma kakhulu lapho ethola indondo ethi “Best Brand Design” 2013/2014″ evela ku-Plus X Award – Umncintiswano ongcono kakhulu emhlabeni we ubuchwepheshe, ezemidlalo kanye nemikhiqizo yokuphila.
Lo mkhiqizo we-Braun udume ngomugqa wawo wezinto zikagesi zasendlini, kusukela ekwakhiweni kuya ezicini zesimanje nezilula. Kodwa-ke, uBraun uqhubekile nokusungula izinto ezintsha nokufinyelela uma kukhulunywa ngokuletha emakethe uhla lwemishini yokunakekela isikhumba, ikakhulukazi Umshini wokukhipha izinwele we-Braun. Lo mugqa womkhiqizo wakha ngokushesha igagasi elisha, kuze kube manje uthandwa emazweni amaningi ase-Asia, kuhlanganise neVietnam.
Kungani kufanele ukhethe umshini wokususa izinwele we-Braun?
Akukona okungahleliwe Umshini wokukhipha izinwele we-Braun Kuyinto idivayisi ethandwa futhi ethenjwa kakhulu. Kulo mugqa womkhiqizo uzobona izinto eziningi ezivelele, yingakho kufanele ukhethe umshini wokukhipha izinwele we-Braun.
IdizayiniUmshini wokususa izinwele ze-Braun unomklamo ohlangene, wesimanje owenza kube lula kubasebenzisi ukuwusebenzisa kanye nokuwuthwala. Ngaphezu kwalokho, amanye amamodeli afaka nezinkinobho zokusebenza emzimbeni kanye nesikrini sokuqapha esilungele abasebenzisi.
Ubuchwepheshe bokususa izinwele: Umshini wokukhipha izinwele we-Braun unesistimu yokukhishwa kwezinwele ye-IPL ethuthukisiwe, esusa izinwele unomphela ngemva kokusetshenziswa okungu-4 kuphela. Ihlanganiswe nenzwa ye-Sensor Adapter, ithola ngokuqhubekayo ithoni yesikhumba futhi ilungise ngokuzenzakalelayo ukukhanya ngokufanele.
Kulula ukuyisebenzisa nemiphumela emihle: Idivayisi ingashibilika ngokushesha, ikusize ukuthi ususe izinwele ngokushesha nangempumelelo ezindaweni ezidinga ukuhlanzwa. Ngaphezu kwalokho, imodi yokunemba kanye nenzwa yokuxhumana yesikhumba ikusiza ukuthi ukhiphe noma kunzima ukufinyelela ezindaweni zomzimba ukuze uthole umphumela omuhle.
Izindlela eziningi zokususa izinwele: Izindlela ze Umshini wokukhipha izinwele we-Braun vumela ukuhambisana nesidingo ngasinye, okuhlanganisa: Okujwayelekile, okumnene, okumnene. Imodi ethambile nemnene inciphisa amazinga wamandla lapho uqala noma usebenzisa ezindaweni ezibucayi.
>>> Bona okwengeziwe: Ingabe umshini waseKorea wokususa izinwele wase-Kakkuda muhle? Malini?
Ukubuyekezwa kwemigqa engu-4 yomkhiqizo womshini wokukhipha izinwele we-Braun ongazithenga
Imodeli Umshini wokukhipha izinwele we-Braun Okungcono kakhulu futhi okufanele kakhulu ukuthenga namuhla. Izimpendulo zizofingqwa futhi zibuyekezwe yithi ngqo kulwazi olungezansi.
3.1 I-Braun Silk Expert Pro 5 PL5237 umshini wokukhipha izinwele osezingeni eliphezulu
Lo mshini wokususa izinwele we-Braun Silk Pro 5 uhlolwe ngokuphephile ezindaweni ezinelayisensi, ezikhungweni zezokwelapha. Ngakho ungaqiniseka ukuthi ungakwazi ukususa izinwele ezingafuneki ekhaya ngokwakho. Idivayisi inomklamo wokushisa ohlanganiswe nobuchwepheshe be-IPL (Intense Pulsed Light). Ukuletha ukuphepha kubasebenzisi nokusebenza kahle okuphezulu ngemuva kokusetshenziswa okumbalwa. Uzobona imiphumela ngemva kwamasonto angu-4 kuphela wokusetshenziswa, ama-pores ayanyamalala kancane kancane, futhi ngesikhathi esifanayo avimbele ukukhula kabusha kwama-pores, ukubuyisela isikhumba esikhanyayo, esibushelelezi.
I-Braun Silk Expert Pro 5 PL5237 iphinde ifakwe inzwa ye-Sensor Adapt. Inika amandla ukufunda okuqhubekayo kwamathoni esikhumba futhi ilungise ngokuzenzakalela ukukhanya kwenkanyezi ukuze kufane nethoni yesikhumba somsebenzisi. Futhi kunamaleveli okuqina ayi-10 ukusuka komnene kuye konamandla azofanela uhlobo ngalunye lwesikhumba sakho. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangaphinda balungise leli zinga lokushuba ngokuthanda kwabo ngenkinobho yokucindezela efakwe emzimbeni. Amakhasimende angasebenzisa le divayisi kuzo zonke izindawo zezinwele zomzimba njenge: Bikini, izitho, ukhalo, isisu, isifuba, umhlane, ubuso….
Ikakhulukazi, ungasebenzisa ukukhishwa kwezinwele Zomzimba kuwo womabili amadoda, kuhlanganiswe nokushisa okuhlala isikhathi eside okungaba ngu-400,000 wokusha, ukuze usebenze kahle.
Intengo yesithenjwa: 11,900,000 VND
>>>Inkomba: Imishini engu-6 ehamba phambili nethengiswa kakhulu ye-Panasonic ekhaya yokususa izinwele
3.2 Umshini wokususa izinwele we-Braun Silk-Expert Pro 5 PL5137 uphephile
Izikolo ze-Braun Pro 5 PL5137 zomshini wokukhipha izinwele uma usebenzisa ubuchwepheshe obuphephile be-IPL, ukuze usebenze kahle ngokuphelele ekususeni izinwele unomphela. Idivayisi ivumelana ngokuzenzakalelayo nangokuqhubekayo nethoni yesikhumba sakho, iqinisekisa ibhalansi efanele phakathi kokusebenza kahle nokuphepha ukuze kube nomphumela ophelele wokususwa kwezinwele. Umshini wokukhipha izinwele we-Braun Lokhu kufaka ithiphu elinembayo lokuphatha izindawo ezincane njengobuso, umugqa we-bikini, amakhwapha. Umshini uhlangene futhi ulula, ngakho kulula ukuwuphatha futhi kulula ukuwuphatha.
Lo mshini wokususa izinwele we-Bruno unokubaneka okungu-400,000, okungu-30% ngaphezu kwemishini yokususa izinwele engu-Silk · uchwepheshe emi-5 yangaphambili. Ngaphezu kwalokho, iye yahlolwa ngokomtholampilo futhi yaqashelwa ngokokwelashwa kwesikhumba njengephephile yinhlangano yamazwe ngamazwe yezempilo yesikhumba (Skin Health Alliance). Ngaphezu kwalokho, ifaka isikhwezi sobuso esizinikele, esincanyana ngo-15% futhi silula sifike ku-25% kunochungechunge oludala lwe-Braun Silk-expert 5. Lona futhi umshini wokususa izinwele oshesha kakhulu namuhla onesilinganiso sokudubula esingu-1-2s/isikhathi, esiqinisekisiwe ngokwedlulele.
Intengo yesithenjwa: 11,000,000 VND
>>>Funda kabanzi: [Review] Ingabe umshini wokususa izinwele wakwaHomedics muhle futhi kufanele ngiwuthenge?
3.3 Isazi Esiphezulu Se-Braun Silk Pro 3 PL3111 Umshini Wokususa Izinwele
I-Braun Silk-Expert Pro 3 inomphumela wokususa izinwele unomphela ngemva kwezinyanga ezi-3 kuphela. Umshini uzivumelanisa ngokuzenzakalelayo nangokuqhubekayo nethoni yesikhumba somsebenzisi ukuze uthole ukuphepha nokusebenza ngempumelelo. Ubuchwepheshe bokususwa kwezinwele be-IPL buphinde buqinisekise ukuphepha okuphelele, buhlolwe ngokomtholampilo futhi baqashelwa ngokwesikhumba yinhlangano yamazwe ngamazwe yezempilo yesikhumba (Skin Health Alliance). Idivayisi inethiphu enembile ye-IPL, ekuvumela ukuthi ubhekane nezindawo ezincane, ezinzima kakhulu njengobuso, i-bikini noma amakhwapha.
Lo mshini wokususa izinwele we-Braun uphephile, uhlakaniphile ngenzwa yesikhumba ye-Senso AdapT (enokuvikelwa kwe-UV), ubuchwepheshe obuyingqayizivele be-IPL obuzivumelanisa ngokuzenzakalelayo, ngokuqhubekayo nezimo zesikhumba sakho. Umshini ushaya ukukhanya okungu-300,000 ukuze unikeze okulingana neminyaka eyi-16 yokwelashwa. Ikakhulukazi amazinga ama-3 aqinisekisa ukukhanya, azivumelanise nombala wesikhumba sakho. Ihlolwe odokotela, i-dermatologists, efanelekile ukusetshenziswa kwansuku zonke, ngisho nasesikhumbeni esibucayi
Idivayisi futhi inemodi yesilayidi eyenza ukukhanya okuningi kusebenze ukwelashwa okusheshayo, okulungele umzimba. Ukuphepha okwengeziwe nokunemba, kulungele izindawo ezincane nezibucayi.
Intengo yesithenjwa: 8,700,000 VND
3.4 Braun 5280 Silk Epil 5. umshini wokukhipha izinwele nokususwa kwezinwele
I-Braun 5280 Silk Epil 5 yomshini wokukhipha izinwele nokususwa kwezinwele isebenza ukusiza ukususa umlenze, ingalo, nezinwele zamakhwapha ekhaya. Idivayisi isebenzisa ubuchwepheshe be-Close-grip kanye ne-Smart Light enama-tweezers angu-40 ukuze isuse izinwele ezimfishane nezincane kakhulu ngemivimbo embalwa ethambile esikhumbeni. Kuhlanganiswe nesistimu ye-Dual Comfort enekhanda lokubhucunga, lokubhucungwa kwesikhumba okusebenzayo namagilavu ​​okupholisa ukupholisa ngemva kokukhipha. Abasebenzisi bazoba nesikhumba esibushelelezi ngokushesha kuze kufike emavikini angu-4 ngemva kokukha ngakunye. Ifakwe ikakhulukazi amagilavu ​​okupholisa ukuze usize ukupholisa isikhumba sakho ngaphambi kokugcotshwa, futhi ngesikhathi esifanayo upholise isikhumba sakho ngemva kokuwakhisa.
Ikhanda lokushefa lingasetshenziswa njenge-shaver, elinekhanda eligundayo lokuphungula izinwele ezindaweni ezibucayi (amakhwapha, indawo ye-bikini) Idivayisi ingaphinda ilungise isivinini: I-Speed ​​​​1 ye-epilation emnene kanye nesivinini 2 se-epilation. ngokushesha. Ikhanda le-epilator eliguquguqukayo lingatshekiswa ngamadigri angu-15 ngaphambili nangemuva, ngakho kulula ukunamathela esikhumbeni ukukusiza ukususa ngempumelelo nangokunethezeka. Umshini wokukhipha izinwele we-Braun Ifakwe Amathiphu e-SoftLift azimisa ngempumelelo izinwele ezivundlile, eziqondiswe kuma-tweezers. I-Smartlight iphinde ikusize ukuthi ubone ngisho nezinwele ezincane kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 2,290,000 VND
>>>Funda kabanzi: [Review] Ikhwalithi ephezulu engu-5 futhi kufanelekile ukuthenga imishini yokususa izinwele ye-Philips
Ungawusebenzisa kanjani umshini wokususa izinwele we-Braun ngempumelelo nangokuphepha
Ngake ngathenga eyodwa Umshini wokukhipha izinwele we-Braun Uma kufaneleka, into elandelayo okudingeka uyinake indlela yokusebenzisa umshini ngendlela efanele, ngokunembile nangempumelelo.
Isinyathelo 1: Okokuqala, umsebenzisi udinga ukuhlanza indawo yesikhumba edinga ukususwa kwezinwele. Ungakwazi ukushefa ezinye izinwele ukuze usize ngenqubo ephumelelayo yokususa, uqinisekise ukuthi imisebe yokukhanya ingangena kalula ezimpandeni zezinwele.
Isinyathelo sesi-2: Okulandelayo, udinga ukuhlola ngokucophelela ukuze ubone ukuthi isikhumba esizoba nombala wezinwele, nokuthi imuphi umbala wesikhumba ongakhetha ukuqina kokukhanya okufanele kakhulu.
Isinyathelo sesi-3: Ukuze usebenzise umshini, udinga ukukhetha imodi yokusebenza efanele.
Uma ikwimodi ezenzakalelayo: Cindezela inkinobho ethi Flash imizuzwana emi-3-5 kuze kukhanye ukukhanya.
Uma imodi yezandla, udinga ukuhambisa umshini endaweni okufanele uphathwe ngayo, lapho ukukhanya kukhanya, cindezela inkinobho ye-Flash.
Isinyathelo sesi-4: Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuphumula ngesici sokuvuselela isikhumba, ukusikhipha umzimba noma ukusebenzisa imodi yokukhipha umshini. Lezi yizici ezinconyiwe esikhumbeni sobuso, ukuqinisekisa umphumela omuhle esikhumbeni.
Ngenhla kukhona amasheya ethu mayelana nomugqa Umshini wokukhipha izinwele we-Braun waseJalimane uyathandwa futhi wethenjwa abesifazane abaningi. Ngalo mugqa wemishini, ngeke usakhathazeka ngokukhula kwezinwele ngokweqile emilenzeni yakho, ezingalweni noma emhlane. Thola ukuzethemba okukhulu uma ugqoke izingubo ezipholile, ezihehayo. Ngakho-ke, gcina lesi sihloko bese ubhekisela kuso ngokushesha nje lapho udinga ukukhetha ukuthenga umshini wokukhipha izinwele we-Braun!
>>>Funda kabanzi: [Review] Okhilimu abayisi-8 abaphephe kakhulu bokukhipha izinwele ze-pubic
Xem Thêm Thương hiệu Bosch của nước nào? Có nên mua máy rửa bát Bosch không? | Muasalebang
Điện thoại Samsung Galaxy S30 | Muasalebang
Tổng hợp 15 cách làm pudding đơn giản, béo mịn, núng nính, cực ngon | Muasalebang